အဆိုပါသမုဒ္ဒရာထဲတစ်ဦးကဘဝ - ယခုဘဝ Nomadik - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
တစ်ဦးကမိသားစုတစ်လှေပေါ်တွင်နေထိုင်ပြီးဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းရွက်လွှင့်နိုင်ရန်အတွက်အရာအားလုံးကိုရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ တွေ့ဆုံ Ivo နှင့် Mira, 39, သူတို့၏ 12 နှစ်အရွယ်သမီး, မာယာ။
ရေပေါ်မှာ Living လျော့နည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အသစ်တခုနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိငါတို့သည်နှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းပြီးအလွန်မြန်ဆန်စွာကိုယျ့ကိုယျကို oriented ရရှိရမည် - အနီးဆုံးဆိုင်သည်အဘယ်မှာရှိပါကသွားကြဖို့အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးရှိရာဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ, အဘယျသို့ငွေကြေးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ကြ၏ရှိရာ။ ထိုအခါအခိုက်ကျွန်တော်နီးပါးနေရာတစ်နေရာန်းကျင်ငါတို့လမ်းသင်ယူကျနော်တို့အခြားသောအရပ်မှပြောင်းရွေ့ရာသည်အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သောအရာကိုသိပါပြီ။ ထိုအရာခပ်သိမ်းကိုစတုရန်း '' တစျ '' ကနေစတင်ပါသည်။
ကျနော်တို့အမှုအရာတစ်ခုရွားလှတွေအများကြီးသင်ယူခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဟာ 30 နိုင်ငံများနှင့်ကျွန်းများသွားရောက်ခဲ့ကြသည်နှစ်နှစ်အဘို့, ကျနော်တို့တဦးတည်းသာလှေများနှင့်သင်္ဘောများပေါ်တွင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျတျောမူသောဒဏ္ဍာရီပုဂ္ဂိုလ်များ၏နံပါတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီ ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မိတ်ဆွေများကိုစေပြီ။
တစ်ရွက်လှေပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏အားသာချက်ကျနော်တို့နေရာတိုင်းကြှနျုပျတို့သညျသှားအိမ်မှာခံစားရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာအဝှမ်းမှပင်လယ်ကူးစဉ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအားလုံးလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်များတင်ဆောင်လာသောခရုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့သည်အမှန်တကယ်ပင်လယ်ကူးကြသည်မဟုတ်သည့်အချိန်အများစုကိုကျနော်တို့တချို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းများကဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တကယ်မြေပေါ်တွင်နေထိုင်နေကြလက်လွတ်မပါဘူး။ ကျနော်တို့အချိန်ကသာ 10% ရွက်လွှင့်။
ကံမကောင်းစွာပဲအခြေအနေကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာတစ်ခုကြီးမားအမှိုက်ပုံးသို့လှည့်ပြီ။ လူနေထိုင်မှုမရှိကျွန်းများ၏ကမ်းရိုးတန်းပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်၏လိပ်ခေါင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းဖို့မြေဆိုဒ်များကဲ့သို့ကြည့်ရှုပါ။ ကျနော်တို့ပနားမားကနေပုလဲကျွန်းများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်ခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုမျက်နှာပြင်ပလပ်စတစ်ပုလင်း, ပလပ်စတစ်အိတ်နဲ့ခွက်နဲ့ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်ဘယ်မှာအများအပြားစတုရန်းကီလိုမီတာ၏ဧရိယာကိုကူး။ ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာပဲ! ဒါဟာလုံးဝသမုဒ္ဒရာထဲသို့ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ ကျွန်တော်ကြာကြာခရီးရှိသည်နှင့်ကမ်းနားကနေသတ်မှတ်အကွာအဝေးမှာကြှနျုပျတို့ကိုရေ၌သတ္တုနှင့်စက္ကူဖန်ပစ်ရန်ဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးရှိသည်နှင့်သူတို့သဘာဝသူ့ဟာသူပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အခါ, ဒါပေမယ့်ပလပ်စတစ်ဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာရွက်လွှင့်ကြလျှင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ပလပ်စတစ်အိတ်များနှင့်အခြားအမှိုက်လျှော်ကျွန်တော်တစ်ဦးကမ်းကိုရောက်ရှိသည်အထိကျွန်တော်တစ်ဦးအမှိုက်အိတ်၌ပါသမျှကိုစောင့်ရှောက်။ ထိုအခါမှသာရုံအမှိုက်ပုံးအတွင်းရှိအမှိုက်သရိုက်ပစ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလှပသောကမ်းခြေသို့သွားရောက်အခါအလွန်ကိုမကြာခဏကျွန်တော်ကျွန်တော်ကို clean up ညစ်ညူးခဲ့ရဲ့ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကအရမ်းညစ်ပတ်ကမ်းခြေပေါ်ပစ်ကျနော်တို့အမှိုက်သရိုက်များနှင့်ပလပ်စတစ်စွန့်ပစ်နှင့်ပြည့်စေခဲ့ဟောင်းအစိမ်းရောင်တဲကိုမွငျလြှငျတခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကဒီပဏာမခြေလှမ်းအဆိုပါအစိမ်းရောင်တဲ Project မှခေါ်ပြီ။
လူအများစု၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကအလွန်ဆင်တူသည်။ သင်၏အသက်တာတစ် 24 နာရီကာလအဘယ်အရာကိုသင်သမုဒ္ဒရာ၌ရှိကြ၏သည့်အခါတူသနည်း
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်ရက်ပေါင်းများစွာသာသေးငယ်တဲ့ခရီးလုပ်နေပါပြီ။ ကျနော်တို့အလိုအလျောက်အညွှန်းရှိသည် ဖြစ်. , ကျနော်တို့ကလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့် autopilot ပေါ်တွင်လှေရွက်ကြကုန်အံ့။ နံနက်ယံ၌ကျွန်တော်နံနက်စာရှိသည် - အသီးအနှံ, အလျင်အမြန်စေလွှတ်ဥ, crepes ။ ငါသည်အခြားနေ့ကမုန့်ဖုတ်ရမည်။ ငါမုန့်စိမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသော့ပွငျ, ပြီးတော့ငါ onboard ငယ်မီးဖိုတဖို၌ဖုတ်ရမည်။ မာယာအဖြစ်ကောင်းစွာသူမ၏သင်္ချာစာမေးပွဲနဲ့တခြားဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာနာရီစုံတွဲတစ်တွဲအကြောင်းကိုသူမ၏ကြာပါသည်။ ထို့နောက်သူမကဒါရက်နေ့မှာကစားရန်သီချင်းနားထောင်နိုင်ရန်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်အချို့သောငါးဖမ်းလျှင်, ငါတို့သည်နေ့လယ်စာများအတွက်ငါးရှိသည်။ ကျနော်တို့ကမိုးရွာသည့်အခါမိုးရေစုဆောင်းနှင့်အဝတ်လျှော်ဘို့သုံးပါ။ ကျနော်တို့တချို့ပုံးထဲမှာလက်ဖြင့်အဝတ်လျှော်လုပ်ပါ။ ငါတို့သည်လည်းသောက်သုံးရေနှင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုဆေးကြောဘို့ရေဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်ရွက်လွှနေကြသည်သောအခါ, များသောအားဖြင့်, ချက်ပြုတ်စာအုပ်တွေဖတ်, အခြို့အရာကြွင်းသမျှယူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် destination သို့ရောက်ရှိသည်အထိပင်လယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောမိုင်ရေတွက်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ညဦးယံ၌ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့နဲ့အတူရွက်လှေချပြီသောအခါမူကား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျွန်တော်စောစောထရကျနော်တို့ကကမ်းကိုသွားနံနက်ယံ၌, ငါတို့ပြီးရင်ကျနော်တို့မနက်စာရှိသည်, နာရီဝက်အဘို့အပြေးရတာ, ငါတို့စျေးဝယ်သွားပါသို့မဟုတ်ငါတို့သည်ငါတို့၏အဝတ်လျှော်သည့်ဟင်းလျာများပြုပါနှင့်ကို clean up ။ မာယာလှေပေါ်မှာငါနှင့်အတူလေ့လာတယျ။ ငါမုန့်ပါစေ။ ထိုအခါမှသာလမ်းလျှောက်သွားပါသို့မဟုတ်ရုံ sightseeing အတွက်ဧရိယာထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ရေငုပ်သွားပါ။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ငါတို့သည်အချို့သောကြွင်းသောအရာကိုလည်း ယူ. ညစာချက်ပြုတ်။9ညနေတွေအကြောင်း, ထိုအခါကျွန်တော်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွန်တော်အစောပိုင်းအိပ်ရာဝင်
ကောင်းပြီ, နေရာတိုင်းကလူကိုသူတို့လုပ်နေတာမကြိုက်ဘူးအရာနှင့်အလွန်အလုပ်များနေကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်။ ဤသူသည်ငါသတိထားမိကြတဲ့ဘုံစရိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူတို့ကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ပေမယ့်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်မထင်ကြဘူး။ သူတို့ကပိုက်ဆံနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ဝတ္တရားအပေါ်အရမ်းမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကသူတို့အချိန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှတစ်ဦးလျင်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ အချိန်ရှိသည်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏သူကျေးလက်ဒေသတွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အများဆုံးနွေး-နှလုံး, friendliest, အများဆုံးရက်ရက်ရောရောနှင့်လည်းရွှင်လန်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။
ကျနော်တို့ပင်လယ်စာအတွက်အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ ငါးဖမ်းကျနော်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုပါအရာဖွစျသညျ။ ကျွန်တော်ရွက်လွှအခါ Ivo များသောအားဖြင့်တစ်လိုင်းနှင့်ချိတ်နှင့်အတူငါးဖမ်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုရပ်တန့်သောအခါ, ထို angling မသွားဘူး, သူကျောက်တန်းချ harpoons ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်, ဤငါးချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြ, ငါတို့သည်လည်းဆူရှီပါစေ။
အလှဆုံးကျောက်တန်းဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်း, အဘဟားမားနှင့်ပနားမား၏ San Blas ကျွန်းများတဝိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒိုမီနီ၏ကျွန်းပေါ်မှာဤရှန်ပိန်သဲသောင်ပြင်ဘယ်မှာပူပူဖောင်းတစ်ခုရေအောက်မီးတောင်ကျောက်တန်းထဲကထွက်ကြွရှိနေကြသည်နှင့်ဤရေငုပ်သွားကြဖို့အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်ရှိသေး၏။ ငါတို့သည်လည်းကဘဟားမားအပေါ်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးလူသိများငေအပြာရောင်အပေါက်, မြင်ကြပြီ။
ကျနော်တို့ကအမြဲနိုင်ငံခြားသားတွေ, ငါတို့ခဏအဘို့ဖြစ်ဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာပိုင်ကြဘူးသူတွေကိုအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြသည်ခရီးသွားဧည့်ဖြစ်ခြင်း။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်လုံခြုံရေးများ၏ခံစားချက်လက်လွတ် - သင်မနက်ဖြန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်, ရှေ့ဆက်အချိန်သင်၏နောက်တပတ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်တစ်နှစ်သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာစီစဉ်ရန်, တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်ဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိရန်။ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတှငျစစျမှနျသောစွန့်စားမှုကြုံနေရလျက်, ထိုသို့နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအချို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်နှင့်အတူကျနော်တို့ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသက်ပေတည်း။ တဦးတည်းအမှန်တကယ်စွန့်စားချင်သည်ဆိုပါကဤသူကျွန်တော်အပေါ်အစာကျွေးရည်၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ယင်းမြေပေါ်တွင်, လူတွေပုံမှန်ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန်ဝင်ငွေလိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိသင်၏အသက်တာပစ္စည်းကမ္ဘာကြီးအပေါ်မှီခိုရသနည်း
စအဦး၌ငါတို့သည်ကိုယ်ငွေစုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တော်ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ကျန်ကြွင်းရစ်သောငွေ, ကား, ငါတို့ကနေဒါခဲ့သမျှသောပရိဘောဂတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးငွေကြေးထောက်ပံ့။ ထိုအခါကျွန်တော်တစ်ဦးလှေဝယ်ကတပ်ဆင်ထားတဲ့။ ခဏတစ်ပြီးတဲ့နောက်ကျနော်တို့အနေနဲ့ဝင်ငွေဝင်ငွေစတင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ www.caribbeancompass.com, ကာရစ်ဘီယံအပေါ်အကြီးမားဆုံးရွက်လှေနှင့်ယောက်မှာမဂ္ဂဇင်းအတွက်ဆောင်းပါးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုထုတ်ဝေ။ ထို့အပွငျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မှလူသေးငယ်တဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ကငါးရာတဲ့ဒေါ်လာကနေကျွန်တော်တို့ကိုပို့လိုက်ပါ။ ငါတို့အဘို့အပင်အသေးဆုံးလှူဒါန်းမှုကိစ္စရပ်များ။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုတစ်ဦးအလွန်ချွေတာခြင်းနှင့်ကျိုးနွံဘဝနေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအစားအစာအပေါ်ဖြုန်းသောအရာကိုငါးဆယ်ခုမှဒေါ်လာနေ့ဖြစ်၏။ ဤရွေ့ကားအလှူငွေ, သို့သော်, ငါတို့အဘို့အသာဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုမဟုတျပါ, သူတို့ကလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏အသက်ငါတို့လမ်း, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးများ၏အတည်ပြုကြောင်းဆိုလိုတာ။ အတော်များများကစာဖတ်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုပရိုဖိုင်းအတွက် upload တင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုကနေလှုံ့ဆော်မှုရ။ သူတို့သည်သင့်မှတ်စုကျေးဇူးတင်နှင့်အကြံဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးကျွန်တော်တို့ကိုရေးပါ။ ဒါကကျနော်တို့၏အိပ်မက်မက်နိုင်ကအကောင်းဆုံးအသိအမှတ်ပြုသည်။
Facebook ပေါ်တွင်ဘဝ Nomadik
အဆိုပါအသက်တာ Nomadik ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်
လှေ, ပုံရိပ်တွေ, ဘဝ nomadik, သမုဒ္ဒရာ, ခရီးသွား | | rating:5/ 30